OBERE IHE BANYERE ỌRỤ NCHEKWA NA KỌMPUTA - ISIOKWU - 2019
Ị maara na ịkụga bọtịnụ dị iche iche dị mgbagwoju anya na ebe nrụọrụ weebụ abụghị ọrụ kasị dịrị nchebe na-arụ ọrụ na kọmputa? Ọtụtụ nsogbu kọmputa, nje na ihe yiri ya na-apụta dị ka ihe si na ọchịchọ ịmata oke. Ọfọn, n'oge m, m na-achọ ịmata ọnụ ọgụgụ nke ndị na-agụ ga-abanye na nke a (ọ bụrụ na ịnweta ya site na nchọta, mgbe ahụ, ọ bụrụ na ikpere m, m ga-eme ka ị mara na bọtịnụ a na-ebugharị site na bọtịnụ nke na-ekwu: bọtịnụ nzuzo).
Site n'ụzọ, gbasara nchedo kọmputa, ana m atụ aro ịgụ isiokwu ndị na-esonụ:
Otu esi enweta nje na Intaneti
Isiokwu a na-akọwa ụzọ kachasịsịsịsị mfe malware nwere ike isi banye na kọmputa gị n'ime Intanet.
Achọpụta nje virus na kọmputa
Esi esi iṅomi faịlụ maka nje virus na ntanetị tupu ibudata ya
6 iwu nchekwa
Banyere ọrụ dị mma na kọmputa iji belata ọdịdị malware
Na otu ọzọ:
Ihe na-eme ma ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata n'efu na enweghị aha - ihe ị nwere ike ịchọta na Ịntanetị maka arịrịọ a kachasị ajụkarị.
Echere m na ozi a ga-aba uru maka gị.